Ukukhiqizwa ngifaka ngezandla zabo: ubuchwepheshe, workshop. Ukwenza amakhadi Easter. Ukukhiqizwa ikhadi 9 Maya
Ikhadi - iyona element lapho sizama ukuze sidlulisele imizwa yomuntu, isimo sakhe, esimweni zemikhosi. Ezinkulu nezincane, ngesimo izinhliziyo nezilwane ezihlekisayo, esiqinile nenhle, ezihlekisayo futhi kujabulise ... amakhadi ngezinye izikhathi baba kubaluleke kakhulu kunokuba isipho, kuwo enamathiselwe. Futhi-ke, wenza izandla siqu ikhadi yabo kuyoletha injabulo nakakhulu.
Ukwenza amakhadi - ukuqala kuphi?
Bacabanga ngokuyiphutha kwalabo abakholelwa ukuthi ikhadi kungenziwa kuphela usebenzisa iphepha kanye amapensela (amapeni upende). Uma unquma ukwenza isipho sangempela, awukwazi namahloni futhi unike indiza emcabangweni wakhe siqu. Ungathola izindlu ezindala izinkinobho, ubuhlalu, kuze kudabuke umhlane enhle, izimpaphe, ubuhlalu futhi umphetho, Ukunquma Indwangu anemibala, sequins? Khona-ke, singaqiniseka ngokugcwele - amakhadi ukukhiqizwa kuyoba wangempela wobuciko inqubo. Ukuqoqa izinto owenziwayo ubalulekile ukukhumbula lokho ncamashi umcimbi uzobe anikelwe Hack - uma ukumangala KaNcibijane - ungangabazi nge izesekeli shiny, uma Meyi 9 - igxile imibala ebomvu, ophuzi kanye black, uma ngosuku lokuzalwa - akesabi uzizamele. Ngakho, siqala ukuvuna izincwadi ezidingekayo.
Ukukhiqizwa ngifaka ngezandla zabo - inqubo ezithakazelisayo futhi kujabulise. Phela, ngesikhathi kungenzeka hhayi kuphela imali itshalwa kumasheya ezindawo ngakwesokudla umqondo inkondlo congratulatory, kodwa futhi udaba ikhadi kakhulu, eqondiswa imizwa yabo. Ngaphezu zonke lezi zinhlobo zezindwangu, sitawubuye kudingeka iphepha kanye amakhadibhodi, sikelo, iglu, tape stapler, ubumba kanye noboya, amapensela ethafeni namakhaladi, irabha kanye umbusi futhi okuningi.
Yini eyosisiza ukuba senze aphume ishidi abavamile ephepheni yezandla engavamile kakhulu futhi enhle. Ngakho sinquma ku usayizi - iposikhadi kungaba mncane impela, zokuhlobisa it ne izimbali noma imicibisholo noma avamile - of uyibhala A4. Isisekelo sanoma ibuphi ikhadi - kuba ishidi eligoqiwe lephepha. Kuyinto lokhu ukulungiselela futhi kuyoba ensimini ukuze ibe ukubonakaliswa okwengeziwe fantasy.
amakhadi yokukhiqiza ubuchwepheshe lapho besanda kuqala kuyafana - isisekelo lelungiselelwe, okuyinto ke uzobe ehlotshisiwe ngokuvumelana ngokunqoba yena yayilungiselela. Ngokwesibonelo, amaholide kaNcibijane. Lokho kuvame ukuhlanganisa ukudweba ekhadini kaKhisimusi? Egqoke Christmas izihlahla, Snowmen izilwane nabanomusa, bejabule, nabalingiswa abasemqoka holidi - Santa Claus, ingilazi ubuhlalu nokuningi. An isixazululo ezithakazelisayo iwukuba uhlanganise izinhlobo eziningana umhlobiso.
Ngokwesibonelo, ukudweba wanqamula eqhweni Snowman, amabhuzu, amagilavu kanye ibhakede Yenziwe ngephepha ezinemibala glue ngal ngesineke. A umshanelo ukwenza oyiqiniso kunazo - kusukela spichenki noma izinti (kuye ngokuthi inkulu kangakanani indoda yeqhwa yena), nge "umqhele" Fluffy - kulula kakhulu ukwenza kusuka kanzima ngentambo Mochalny (zokwenziwa) noma inguqulo kahle - kahle wabeka ucezu uhala.
Beautiful ikhadi kungaba hhayi kuphela ngendlela ejwayelekile - ishidi eligoqiwe lephepha libe uhhafu.
An isixazululo ezithakazelisayo kungaba amakhadi alo chain ngaphakathi - futhi, kholwa kimi, isigaba master ekwenzeni amakhadi azidingeki (nakuba hhayi ubuhlungu yazi nge izigaba zayo). Konke lokhu Kulula ukwenza iBhayibheli lithi ngemizamo yabo. Ukuze wenze lokhu, ephepheni agobe, bese - isigamu ngamunye uhhafu futhi. Imidwebo kule ikhadi kungase kube onhlobonhlobo - akudingekile ukuphinda leyo nto. Okubaluleke kakhulu - kahle futhi asikwe yezandla - akunakwenzeka ukuba usike indawo lwamaphethini contact. garmoshechku ababhekene nesimo esinje kungabaduduza kunamathiselwe ongavamile, ishidi eligoqiwe (Yiqiniso, esihlelwe ngomumo ngokuhambisana iholide indaba ephathwayo). Futhi-ke uma uvula imifanekiso ngeke iyahambelana ilandelana (efana incwadi-uhlaka).
Inketho ekahle ingane yakho kuyoba ukukhiqizwa amakhadi amafasitela. Okokuqala, iphethini unxande senziwa amakhadibhodi (eligoqiwe ngesigamu), okuyinto usike amafasitela square ambalwa ohlangothini front. Amawindi engase aklonyeliswe lace edging, kuze kudabuke umhlane, noma ukotini umane anamatheliswe kanye sequins. Ngaphakathi, ezingeni amafasitela kufanele slotted ukudweba izithombe ezinemibala emihle. Uma ikhadi eligoqiwe, izibalo zaveza izovela iwindi ngokurhaba. Ungenza isimanga kancane - ngokwesibonelo, lapho ikhadi ivaliwe, ewindini kuyoba ingxenye ebonakalayo izithombe ingaphakathi - inhloko wekati, emacembeni ezimbali ezintekenteke nokunye. Kodwa uma uvula ikhadi - kuyoba wonke picture ngokuphelele. ejabule nakakhulu iphazili imbangela ikhadi. yezandla Ready-ukwenze nje kahle ukusika bese efakwa imvilophu - hero of the isikhathi kuyodingeka umsebenzi othile okufanele ukwenze ukuze ukwazi ukufunda ukubingelela ziqondiswe kuye.
Ikhadi leposi kungenziwa ngendlela imvilophu. Ngokuvamile, lezi yezandla enzelwa zokuzalwa nasemishadweni, uma eshunyekwe zibe ukheshi isipho ezengeziwe. Manje lawa makhadi babé ongakhetha nezidumile kwakuwukubonana kwezithandani (sishunyekwe Ipheshana ngesimemezelo lothando noma esibekiwe endaweni yomhlangano), kanye siyakuhalalisela ngesikhathi Ukunqoba Omkhulu.
Cabanga ngesibonelo sika-master-class enikelwe leli holide. Ukwenza amakhadi ngoMeyi 9 ubukeka - ekuqaleni ubeka isisekelo. Lokhu kuyoba isikwele amakhadibhodi nge oyindilinga engxenyeni engenhla isilinganiso - the lokuqala nelesibili alinganayo laphetha - kancane kancane. Kumila flexes ngesikhathi imigqa kuhlelwa, kanti emaphethelweni (lokuqala nelesibili izingxenye) futhi ethe njo-ehlotshisiwe kudabuke ukuwuthukulula. The wayibhinca elifanayo (kodwa uhamba ngokukhululekile on ngesisekelo) wagqoka izimisele waphetha ingxenye ukuvala emaphaketheni yayo like. Embedded ngaphakathi iribhoni St George, noma ezihlotshiswe kahle kusuka Hack wakhe.
Ukwenza amakhadi Easter engengaphansi bezijabulisa kuka ngemigudu esisanda kuxoxa ngazo. Yiqiniso, nabalingiswa abasemqoka holidi - Easter egg futhi Easter ikhekhe. Amakhadi senziwe kwifomu yemigoqo ethile eminyangweni kahulumeni engase aklonyeliswe izimbali wamasende. Sabalalisa kubo izithombe zobuhlalu, ukunamathisela izimpaphe encane inkukhu futhi wababeka amancane elikhanyayo inkukhu ophuzi.
Ungase futhi wenze iposikhadi nge isimanga - ohlangothini front ukusika amaqanda ezinkulu, futhi ngaphakathi kubhasikidi upende Easter izesekeli. Ikhadi ngesimo amaqanda kungenziwa ngakho - ukunamathisela phezu imiphetho bobunjwa ezimbili ezifanayo okusaqanda, usike kubo ukusondelana clove abacaphuni, bafakwa incwadi izifiso. Noma kweqembu izimpaphe encane. Noma ngisho obuncane candy.
Into ebaluleke kakhulu ukukhumbula, ngithabatha womshini amakhadi - ukuthi le nqubo aluphoqelekile, futhi zokudala. Kuphela indlela ake amehlo akho engqondo run zasendle, kuyoba enkulu futhi umphumela. Ngezinye izikhathi ikhadi umphefumulo wenza kuba ezibizayo okungaphezu eyigugu kunazo zonke izipho. Vuma ke, cishe sonke kwadingeka ikhadi ezinjalo, esiye sasihlale siphethe isikhwama, isikhwama, esikhwameni, inqobo nje uma leli phepha akuyona kusulwe ngokuphelele. Futhi ungacabangi ukuthi ikhadi nje enhle ngokumangalisayo efana nalowo uya lona.
Ngisho imbali elula, ethe njo Ukuboshelwa, nge ingcina engavikelekile, ne imiphetho emincane kungaba eqolo ngoba inhliziyo, uma wenza izandla yengane yakho.
Ngengulube kusuka amabhodlela epulasitiki - ngezandla zabo ukwenzela ukuthi kube lula futhi elula!
Funny master ekilasini: indlela yokwenza entendeni ibhodlela
Ukufunda thunga ibhulukwe kahle
Indlela yokwenza indlu aphume wephepha umdlalo noma umhlobiso ingaphakathi
Small ekwindla nokhuni bead: incazelo wesifunda, ikilasi master Wabasaqalayo
Ikhekhe waseGibhithe: iresiphi ngesithombe
Analogue eshibhile "Hilak Forte": imfundo, ukubuyekezwa
Neurosis e ingane
Umdlavuza Laryngeal: Izimpawu
Kuyini uhlu black of "In Touch" futhi kanjani ukuyisebenzisa?
Indlela yokudweba "i-Maincraft"? Isigaba samakhosi aphansi
Indlela ukuhlela, ingaphakathi endlini yangasese nge eshaweni?
Njengoba kule "EC" wenze isixhumanisi? Futhi lokho bungatholakala ngale ndlela ukuba ngamunye wethu?
Nenshisekelo imitshina nokuthi asebenza kanjani
Werdnig-Hoffmann: ifomu kanye izimpawu eziyinhloko